ခါးသောအနိမ့်ပန်းပန်းပွင့်ပုံနှိပ်ပါ Bikini Set - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
$14.20 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $15.78
အရောင် မိန်းမရေကူးဝတ်စုံ ဂါဝန်အရှည်တစ်ဆက်တည်း
S / bikini M / bikini L / bikini XL / bikini S / တ ဦး တည်းအပိုင်းအစ က M / တ ဦး တည်းအပိုင်းအစ L / တ ဦး တည်းအပိုင်းအစ XL / တ ဦး တည်းအပိုင်းအစ
ခါးအနိမ့်ပန်းပန်းပွင့်ပုံနှိပ် Piked Bikini အစုံ - S / bikini backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
UK Size: 6-8/10/12/14
အီးယူ Size: 34 / 36 / 38 / 40
အမေရိကန် Size:4/6/ 8 / 10
အလွန်ကောင်းတဲ့ဝတ်စုံ, ကောင်းသောအထည်။ ချုပ်ထားအရည်အသွေး
ငါစတိုးဆိုင် recomend, ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းပါတယ်, ရောက်ရှိလာခဲ့? short တိုတောင်းသောအချိန်
စတိုးဆိုင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုစိတ်ဓာတ်သည်ကောင်းမွန်သည်။ ဖြန့်ဝေသည်မှာမြန်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးမှာလည်းကောင်းမွန်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဆိုင်ကောင်း, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကအရမ်းသဘောကျတယ် နောက်တစ်ခါပြန်လာပါ
ဓာတ်ပုံလိုပဲ။ အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်